कहिले काहीँ ओठ तथा जिब्रोमा यस्ता घाउहरू किन आउँछ र त्यसको समाधान के हो ? जानीराखौं – List Khabar
Home / जीवनशैली / कहिले काहीँ ओठ तथा जिब्रोमा यस्ता घाउहरू किन आउँछ र त्यसको समाधान के हो ? जानीराखौं
admin February 9, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 128 Views
यसले गर्दा लगातार दुख्ने, पोल्ने,ज्वरो आउने, घाँटीको ग्रन्थि सुन्निने, दुख्ने समस्या पनि निम्तिन सक्छ। किन आउँछ मुखमा घाउ-खटिरा ? खासगरी शरीरमा पोषणको कमी (भिटामिन बी, सी, आइरन, प्रोटिनलगायत भोजनमा रेसादार खानाको कमी आदि) ले मुखमा घाउ हुन्छ । यसरी नै दाँत नमाझ्ने, खाना खाएर कुल्ला नगर्ने जस्ता सरसफाइको कमी, पेटसम्बन्धी रोगहरू (कब्जियत, ग्यास्ट्राइटिस वा अम्लपित्त, अपच आदि), पानीको कमी भएमा पनि मुखभित्र खटिरा आउने गर्छ। त्यस्तै, खाद्य विषाक्तता, सुर्ती-पानमसला, मद्यपान र धूमपान गर्ने, ब्याक्टेरिया तथा फङ्गसको संक्रमण, बढी तातो र मसलाहरू वा बढी अम्ल भएको खानपान गर्दा मुखभित्र र वरपर घाउ आउने गर्छ ।
Previous डेड वर्षदेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी फेब्रुअरी १४ बाट खुल्दै ?
Next बिहेपछि यौन चाहना हुन्न ? यस्तो रहेछ कारण र उपाय